के गर्ने यदि एप्पल आईडी रोकिएको छ भने आईफोन समाचार
के गर्ने यदि तपाइँको एप्पल आईडी लक छ
केहि अवसरमा हामी सबैले यस सन्देशलाई हाम्रो कम्प्युटर, आईफोन वा आईप्याडमा प्राप्त गरेका छौं, र आतंक हाम्रो शरीरमा स्वतन्त्र रूपमा चलेको छ। हाम्रो एप्पल आईडी अवरुद्ध गरिएको छ र त्यस समयमा हामी हाम्रो सबै डेटा, एप्प स्टोर, आईट्यून्स, हाम्रो क्रेडिट कार्डबाट खरीदहरू सम्झन्छौं ... तपाईलाई आत्तिनु पर्दैन, यो केवल सन्देश हो र हाम्रो खाता पूर्ण रूपमा सुरक्षित छ। , यही कारणले यो निर्वासित भयो। किन यो कारण भएको? यस जस्तो सन्देशलाई के गर्ने? हामी यसलाई तल तपाईलाई वर्णन गर्नेछौं।
1 मेरो खाता किन ब्लक गरिएको छ?
2 कसरी मेरो खाता अनब्लक गर्ने?
3 दुई-कारक प्रमाणीकरण समाधान हुनेछ
मेरो खाता किन ब्लक गरिएको छ?
जब एक व्यक्ति (वा आफैं) ले तपाईको खाता पासवर्ड प्रविष्ट गर्दछ, वा बारम्बार सुरक्षा प्रश्नहरूको उत्तर दिन असफल हुन्छ, सुरक्षाको कारणका लागि तपाईको खाता लक हुनेछ।, अनधिकृत पहुँचबाट बच्न। यो तपाइँ तपाइँको खाता प्रमाणित नगरेसम्म एप्पल सेवाहरू पहुँच गर्नबाट रोक्नेछ। तर त्यो कसरी हासिल गर्ने भनेर हेर्नुभन्दा पहिले हामी के सन्देशहरू देख्न सक्दछौं?
"यो एप्पल आईडी सुरक्षा कारणले असक्षम पारिएको छ"
"तपाईं लग इन गर्न सक्नुहुन्न किनकि खाता सुरक्षा कारणहरूले गर्दा निस्क्रिय गरिएको छ"।
"यो एप्पल आईडी सुरक्षा कारणका लागि ब्लक गरिएको छ"
सबै तीन सन्देशहरू बराबर छन् र समान अर्थ, त्यसैले कार्य मोड तीनमा कुनै पनि अवस्थामा समान छ।
कसरी मेरो खाता अनब्लक गर्ने?
एप्पलको यस उद्देश्यका लागि एक विशिष्ट वेबसाइट छ: मैले बिर्सिए. यसमा तपाईं खाता अनलक गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईंको पासवर्ड रिकभर गर्नुहोस् वा नयाँ थप्नको लागि रिसेट गर्नुहोस्। तर यदि तपाईसँग २-चरण प्रमाणिकरण अन गरिएको छ भने, चीजहरू त्यति सजिलो हुँदैन। के तपाईंलाई सम्झना छ कि सुरक्षा कोड जुन एप्पलले सक्रिय गर्दा तपाईंलाई कहिले पनि हराउँदिन र तपाईं सुरक्षित ठाउँमा राख्नुपर्दछ भनेर भनेको थियो? ठिक छ, यो समय यसलाई प्रयोग गर्ने हो।
दुई-चरण प्रमाणिकरणको साथ, तपाईंलाई कम्तिमा निम्न तीन वस्तुहरूको दुई आवश्यक छ:
तपाईको एप्पल आईडी पासवर्ड
तपाइँको एक विश्वसनीय उपकरणमा पहुँच गर्नुहोस्
तपाईंको पुनःप्राप्ति कुञ्जी
यदि तपाईंलाई आफ्नो पासवर्ड थाहा छैन र तपाईंले रिकभरी कुञ्जी हराउनु भयो भने, तपाईंसँग आफ्नो खाता रिकभर गर्ने कुनै तरिका छैन। तपाइँको लागि समस्या समाधान गर्न को लागी एप्पलसँग सिधा कुरा गर्नुहोस्, तर त्यसो गर्न तिनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ।
दुई-कारक प्रमाणीकरण समाधान हुनेछ
एप्पलले आईओएस and र ओएस एक्स एल क्यापिटनको साथ नयाँ सुरक्षा प्रणाली प्रस्तुत गर्‍यो जसले दुई चरण प्रमाणिकरण सुधार गर्‍यो, र यसलाई भनिन्छ दुई कारक प्रमाणीकरण। तिनीहरू उस्तै उस्तै देखिन्छ तर यस्तो छैन, किनकि रिकभरी कुञ्जी द्वारा वितरण गरिएको छ, र एप्पलले तपाईंको खाता रिकभर गर्न सक्दछ यदि तपाईंले अनुरोध गर्नुभयो भने। यो नयाँ सुरक्षा प्रणाली अझै सबैको लागि उपलब्ध छैन, किनकि यो अझै विकासको अधीनमा छ। यदि तपाईं भाग्यशाली व्यक्तिहरू मध्ये एक हुनुहुन्छ भने यो पहिले नै सक्रिय छ, उत्तम, यदि होईन भने, तपाईंले कुर्नुपर्नेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईओएस » iOS9» के गर्ने यदि तपाइँको एप्पल आईडी लक छ
म सम्भवत १० बर्षको लागि एप्पल उत्पादनहरू प्रयोग गर्दैछु र मैले कहिले पनि यो सन्देश देखेको छैन।
Jeannette एन्जिल्स Valverde Delgado भन्यो
कसरी एआई फोन प्राप्त गर्न को लागी
Jeannette एन्जिल्स Valverde Delgado जवाफ दिनुहोस्
तपाईं कती भाग्यमानी हुनुहुन्छ, फिडेल लोपेज। त्यो धिक्कार सन्देश मलाई देखा परेको छ। हास्यास्पद कुरा यो हो कि म इफोर्गटमा गएँ र नयाँ पासवर्ड राख्छु र अझै पनि, म न आईफोनबाट पहुँच गर्न सक्दछु न म्याकबाट।
र यो बौद्धिक हो। मलाई थाहा छैन म के गरु
के तपाई आफ्नो समस्या समाधान गर्न सक्नुहुन्छ ???
Aledx लाई जवाफ दिनुहोस्
मेरो सीटीए आईडी ब्लक गरिएको थियो तर यसलाई प्राप्त गर्न उनीहरूले मलाई पठाए मेरो टेलिफोन नम्बर को सन्देश मेरो प्रमाण पत्रको रूपमा उनले मलाई बताउँछन् कि मेरो नाकाबन्दी प्रकृयामा छ तर सीटीए प्राप्ति गर्न चाहन्छु तर मसित केही दिन छ तर दुई दिनसम्म भेट्ने छु केही छैन
नमस्कार सान्ड्रा, मलाई त्यस्तै हुन्छ। के तपाईं खाता रिकभर गर्न सक्षम हुनुहुन्छ? यो कति समय भयो? वा तपाईं कसरी गर्नुभयो?
Horacio लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार, मलाई पनि त्यो समस्या छ, मैले मेरो आईडी डिसेक्टिभ गरें र मलाई के गर्ने भनेर मलाई केही पनि थाहा छैन किनकि मलाई घुम्न जानको लागि मलाई सहयोग दिन कसैलाई चाहिएको छ।
रोलान्डो एस्पिनोजा भन्यो
मलाई पनि त्यस्तै भयो, म धेरै दिनदेखि एक्टिभेसन लक हटाउनको लागि कोडको लागि कुर्दै छु। अब के गर्ने थाहा छैन।
रोलान्डो एस्पिनोजालाई जवाफ दिनुहोस्
म निरन्तर सन्देशको साथ ईमेलहरू प्राप्त गर्दछु, तर प्राप्तकर्ता एक मेल सेवा हो र याहूले सिधा स्पाम फोल्डरमा पठाउँदछ।
नमस्कार, मेरो नाम फर्नान्डो हो, म तपाईंलाई गम्भीर समस्या भएको बताउन सक्छु, मेरो फोन ब्लक गरिएको छ किनकि मलाई ११ बर्ष अघि भएको पुरानो फोन याद छैन।
कृपया मलाई मेरो जानकारी पुनर्प्राप्त गर्न आवश्यक छ मैले आफ्नो फोन आईप्याड अपडेट गर्न सक्दिन र घडीले म केहि अपडेट गर्न सक्दिन, तिनीहरू मेरो खाता जाँच्न चाहन्थे र तिनीहरूले सकेनन् र उनीहरूले मेरो सम्पूर्ण खाता ब्लक गरे र म पहुँच गर्न सक्दिन किनकि यसले मलाई प्रवेश गर्न अनुरोध गर्यो। ट्रस्ट नम्बर र मलाई यो याद छैन, धेरै कम मसँग छैन तर धेरै वर्ष पहिले यो मसँग थिएन, म आफ्नो फोनको साथ केही गर्न सक्दिन, मैले पिप्लेट स्टोरलाई फोन गरे र उनीहरूले मलाई जे भए पनि समाधान गर्न सकेनन्। एक घण्टा र त्यसपछि तिनीहरूले मलाई केहि गर्न सक्दैनन् भनेर भने
कृपया यदि कसैले मलाई मद्दत गर्न सक्दछ भने म टेल, आईपड र घडी अवरुद्ध भएको हुँ
यदि कसैले मलाई यो समस्याको साथ मद्दत गर्न सक्दछ भने, मलाई कसले कसको बारेमा कुर्नु पर्छ भन्ने कुरा थाहा छैन
तपाईको ध्यानाकर्षण को लागी धेरै धन्यबाद
इमोजी स्वीकृत भयो जुन आईओएस १० मा आउनेछ। पाल्ला तिनीहरू मध्ये एक हो
अमेरिकामा आईफोन एसईको लागि माग स्टक भन्दा बढि छ